“फोहोरबाट बिजुली” निकाल्न तीन आयोजना छनोटमा – Sourya Online
“फोहोरबाट बिजुली” निकाल्न तीन आयोजना छनोटमा
सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख १४ गते २३:४० मा प्रकाशित
काठमाडौं, १५ वैशाख । जैविक फोहोरबाट बिजुली निकाल्नका लागि उत्कृष्ट तीन आयोजना छनोट भएका छन् ।
फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने अभियान स्वरूप विश्व बैंकको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी) ले काठमाडौंमा ऊर्जा बजार अभियानबाट उत्कृष्ट तीन आयोजना छनोट भएका हुन् ।
‘फोहोरमा पनि छ सम्भावना हजार, फोहोरभित्र छ शक्ति, तपाईं निकाल्नुस जुक्ति’ भन्ने नाराका साथै फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्नका लागि आयोजनाहरूको प्रस्ताव गरेकोमा १ सय २८ आयोजनाले प्रस्ताव गरेकोमा त्यस मध्येबाट उत्कृष्ट १० छानिएका थिए । ती मध्येबाट समेत ऊर्जा बजार अभियान कार्यक्रममा तीन आयोजना छानिएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको छनोट समितिले तीन आयोजनालाई उत्कृष्ट ठहर्‍याएको हो । उत्कृष्टमध्ये चितवनको सुख अल्टरनेटिभस्को पोल्टी फार्मबाट बायोग्याससम्बन्धी प्रस्ताव पहिलो, रूपन्देहीको लुम्बिनी एग्रोको प्रस्ताव दोस्रो र तनहुँको ग्रामीण तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रालिको प्रस्ताव तेस्रो भएको थियो । विश्व बंैकको सहयोगमा उत्कृष्ट परियोजनाका उपायहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
देशभरबाट प्राप्त उपायहरूको नविनता, कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावित साझेदारी, दिगोपन लगायतको आधारमा उत्कृष्ट आयोजना छनोट गरिएको हो । कार्यक्रममा ३० प्रस्तावको पोस्टरसमेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।
जैविक फोहोरबाट ऊर्जा निकाली यसमार्फत आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए । ‘यस अभियानले फोहोरबाट बिजुली निकाल्नका लागि ठूलो योगदान दिएको छ, अब ती उत्कृष्ट आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि विश्व बंैकसँग सहयोग मागेर अघि बढ्छौँ ।’, उनले भने ।
ऊर्जा बजार अभियानअन्तर्गत भएको कार्यक्रममा विश्वका १५ देशका सहभागीले फोहोरबाट बिजुली निकाल्दाका अनुभवका साथै नवीकरण ऊर्जाको विकासक्रमबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सकेमा नेपालमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने आशा लिइएको छ । हालै सार्वजनिक नयाँ नवीकरणीय ऊर्जा नीतिमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गरेमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति ल्याएको छ ।
कार्यक्रममा डेनिस एम्बेसीकी पहिलो सेक्रेटरी डिटेल बज्रेगार्ड, सहायक मिसन प्रमुख चमिला रोजाक, विश्व बैंककी वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ मौहा मुखर्जीलगायतले खेर गइरहेको जैविक ऊर्जाको उपयोगबाट ऊर्जा उत्पादन गरेर ऊर्जा संकटको न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।